မြန်မာနိုင်ငံကို ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မူ စွဲချက်နဲ့ ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးရဲ့ စီရင်ပိုင်ခွင့်ကို NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရ ကနဦး ကန့်ကွက်ခဲ့တာ အားလုံးကို ပြန်ရုတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်း NUG ကြားကာလ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် ။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်မှာ ICJ ကကြားနာဖို့ ရှိတဲ့ စစ်ကောင်စီရဲ့ချေပမူကို ဖျက်သိမ်းပြီး၊ NUG ကိုယ်စားလှယ်ကိုသာ လက်ခံဖြေရှင်းခွင့်ပေးဖို့ ICJ ကို တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဘာကြောင့် အခုလို ရုတ်သိမ်းရပြီး၊ ရှေ.ဆက် စီရင်မူ ဖြစ်နိုင်ခြေ အလားအလာနဲ့ ပတ်သက်လို့ Tampadipa မူဝါဒလေ့လာရေးအဖွဲ့ ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာခင်ဇော်ဝင်း နဲ့ မြန်မာရိုဟင်ဂျာများအဖွဲ့ (UK) ဥက္ကဌ ဦးထွန်းခင် တို့ကို ကိုဝင်းမင်းက မေးထားပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အခုလိုလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာ ကနဦးကန့်ကွက်မှုကို NUG ဖက်က ပြန်ရုတ်သိမ်းလိုက်ရတာရဲ့ အရေးပါမှုကို Tampadipa တမ္ပဒီပ အင်စတီကျု့ မူဝါဒလေ့လာရေးအဖွဲ့က ဒေါက်တာ ခင်ဇော်ဝင်း က
ဒေါက်တာ ခင်ဇော်ဝင်း ။. ။ ဒါက သဘာဝကျတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ရှင်းရှင်းပြောရင်ဗျာ။ မဟုတ်တာလုပ်ခဲ့တာ။ အဲဒါနဲ့ကို တိုင်းပြည်ကော လူမျိုးတွေကော ချာလပတ်လည်ကုန်တာ။ အခုတော့ အစိုးရအကောင်းပဲပြောမှာပေါ့။ ဒီ ကလည်း ခေါင်းအေးအေးနဲ့ စဉ်းစားပြီးတော့ မဟုတ်တဲ့ဟာကို မမှန်တဲ့ဟာကို ပြင်လိုက်တာ ။ ကျနော်ကဝမ်းသာတယ်။ ပြောင်းလည်ပစ်ရမယ်။ ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လည်း ဘူးခံခဲ့တာပဲ။ စစ်ဗိုလ်တွေကလည်း ဘူးခံခဲ့တာပဲ။ လုံးဝရှေ့ဆက်သွားလို့လည်းမရဘူး။ အဖြေလည်းမပေါ်ဘူး။ အခုဟာက ပထမအဆင့်တော့ ပထမအဆင့်ပေါ့ဗျာ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒါအပြင် မြန်မာ ရိုဟင်ဂျာများအဖွဲ့ UK ဥက္ကဌ ဦးထွန်းခင် ကလည်း
ဦးထွန်းခင် ။. ။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကျနော်တို့ တနိုင်ငံလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အစိုးရတရပ်အနေနဲ့ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ Preliminary objections ကန့်ကွက်မှုကို ICJ ကမ္ဘာ့တရားရုံးမှာ ရုတ်သိမ်းတာဟာ ကျနော်တို့နိုင်ငံအတွက် လက္ခဏာကောင်းဖြစ်တယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေအားလုံးက NUG ရဲ့ ရုတ်သိမ်းမှုအပေါ်မှာ ကြိုဆိုတယ်။ ဒီမှာတခုတွေ့ရတာက NLD အစိုးရက လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကို ငြင်းဆန်ခဲ့သလို NUG က မငြင်းဆန်ဘူး။ NLD လုပ်ခဲ့သလိုမလုပ်ဘူး။ ဒီဟာမှာ ပေါ်လွင်နေတာက NUG သည် ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ တရားမျှတတဲ့ မဏ္ဍိုင်တွေအားလုံးမှာ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပူးပေါင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာက ဒီနေရာမှာ ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျနော်တို့နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက် အားရစရာပါ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဘာကြောင့်အခုချိန်မှာပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်နိုင်လဲလို့ မေးရာမှာ ဦးထွန်းခင် က ဆက်ပြီးတော့
ဦးထွန်းခင် ။. ။ ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင် ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဖြစ်တုံးက နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံး လက်မခံခဲ့ဘူး။ မဖြစ်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေဆိုရင်က အိမ်တွေရွာတွေ မီးရှို့တာက ကိုယ်ဟာကိုယ်မီးရှို့တယ်လို့ ပြောခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ချင်းပြည်နယ် ထန်တလန်တို့၊ ကရင်နီတို့၊ ကရင်ပြည်နယ်တို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းတို့မှာ ဖြစ်နေတာမှာ ကျနော်တို့နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအားလုံး NUG သဘောပေါက်သွားတာက ဒါတွေက စစ်တပ်က လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာက ပေါ်ပေါ်တင်တင်တွေ့ရတယ်။ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုတွေက ရိုဟင်ဂျာတင်မကဘူး။ တခြားလူနည်းစု ကရင်တွေရော၊ ချင်းတွေရော လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေပြီဆိုတာ ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတယ်။ ဒါတွေကို အခုချိန်မှာ အားလုံးသဘောပေါက်ပြီလို့ ကျနော်က ယူဆပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အခုလိုရုတ်သိမ်းမှုကြောင့် ICJ တရားစီရင်မှုကို ဆက်ဖြစ်လာမှာမေးရာမှာ ဒေါက်တာခင်ဇော်ဝင်း က.
ဒေါက်တာခင်ဇော်ဝင်း ။. ။ ဖွင့်တာမပြောတာပါ။ အားလုံးက ဒါကိုမျှော်လင့်နေကြတာပါ။ အဆိုးဆုံးသံသရာထဲကနေပြီးတော့ ဘာပေါ်လာမလဲဆိုတာ ICJ ကအစတခြား နိုင်ငံတွေကလည်း မျှော်လင့်နေတာပဲ။ ဒီဟာက တော်တော်လေးကိုပဲ အရေးပါမယ်။ ဒါကို ရဲရဲဝံဝံ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ်။ အရင်စစ်တပ်ကလည်း မှားခဲ့တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း မှားခဲ့တယ်။ Out Of Court Settlements ဆိုတာပေါ့ဗျာ။ ဒီအမှုစွဲတင်လာတဲ့ ဂန်ဘီယာနိုင်ငံ က. ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ မြန်မာပြည်က NUG က ပုဂ္ဂိုလ်တွေ တွေ့ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ Informally ပေါ့ဗျာ။ ကဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြပါ။ ပြောင်ပြောလိုက်၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလိုက် အဲဒါအကောင်းဆုံးပဲ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒီအပေါ်မှာ ဦးထွန်းခင် က
ဦးထွန်းခင် ။. ။အခုလို ကန့်ကွက်မှုကြောင့် ခုံရုံးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတော့ တရားရုံးက ကိုယ်စားပြုမှုဆိုတာတော့ရှိတယ်။ အဲဒါကျနော်တို့ ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့ကတော့ ဒီကေ့စ် မှာ NUG ကို အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီအစားတက်ရောက်စေချင်ပါတယ်။ တရားရေးမဏ္ဍိုင်မှာလည်း NUG ရဲ့ ရုပ်သိမ်းမှုဟာ ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက် အရေးပါမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုကြားနာမှု စစ်ဆေးမှုတွေမှာ NUG အခမ်းကဏ္ဍကလည်း ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ တကယ်တော့ ဒီ ICJ အမှုအတွက် စစ်ကောင်စီဖက်ကလည်း ပြန်လည်ချေပဖို့ ပြင်ဆင်ထားကြောင်း စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်း က ဗွီအိုအေ ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ရိုဟငျဂြာ လူမြိုးတုံး သတျဖွတျမူ ICJ စီရငျပိုငျခှငျ့ မွနျမာ ကနဦး ကနျ့ကှကျခကျြ NUG ရုတျသိမျး
မွနျမာနိုငျငံကို ရိုဟငျဂြာလူမြိုးတုံးသတျဖွတျမူ စှဲခကျြနဲ့ ICJ နိုငျငံတကာတရားရုံးရဲ့ စီရငျပိုငျခှငျ့ကို NLD အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ အစိုးရ ကနဦး ကနျ့ကှကျခဲ့တာ အားလုံးကို ပွနျရုတျသိမျးလိုကျတဲ့အကွောငျး NUG ကွားကာလ အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ က ကွညောခကျြထုတျပွနျလိုကျပါတယျ ။ ဖဖေျောဝါရီ ၂၁ ရကျမှာ ICJ ကကွားနာဖို့ ရှိတဲ့ စဈကောငျစီရဲ့ခပြေမူကို ဖကျြသိမျးပွီး၊ NUG ကိုယျစားလှယျကိုသာ လကျခံဖွရှေငျးခှငျ့ပေးဖို့ ICJ ကို တောငျးဆိုထားပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ အခုလို ရုတျသိမျးရပွီး၊ ရှေ.ဆကျ စီရငျမူ ဖွဈနိုငျခွေ အလားအလာနဲ့ ပတျသကျလို့ Tampadipa မူဝါဒလလေ့ာရေးအဖှဲ့ ဒါရိုကျတာ ဒေါကျတာခငျဇျောဝငျး နဲ့ မွနျမာရိုဟငျဂြာမြားအဖှဲ့ (UK) ဥက်ကဌ ဦးထှနျးခငျ တို့ကို ကိုဝငျးမငျးက မေးထားပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အခုလိုလူမြိုးတုံးသတျဖွတျမှုဆိုငျရာ ကနဦးကနျ့ကှကျမှုကို NUG ဖကျက ပွနျရုတျသိမျးလိုကျရတာရဲ့ အရေးပါမှုကို Tampadipa တမ်ပဒီပ အငျစတီကြု့ မူဝါဒလလေ့ာရေးအဖှဲ့က ဒေါကျတာ ခငျဇျောဝငျး က
ဒေါကျတာ ခငျဇျောဝငျး ။. ။ ဒါက သဘာဝကတြယျ။ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ က ရှငျးရှငျးပွောရငျဗြာ။ မဟုတျတာလုပျခဲ့တာ။ အဲဒါနဲ့ကို တိုငျးပွညျကော လူမြိုးတှကေော ခြာလပတျလညျကုနျတာ။ အခုတော့ အစိုးရအကောငျးပဲပွောမှာပေါ့။ ဒီ ကလညျး ခေါငျးအေးအေးနဲ့ စဉျးစားပွီးတော့ မဟုတျတဲ့ဟာကို မမှနျတဲ့ဟာကို ပွငျလိုကျတာ ။ ကနြျောကဝမျးသာတယျ။ ပွောငျးလညျပဈရမယျ။ ဒီလိုပဲဖွဈရမှာ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ လညျး ဘူးခံခဲ့တာပဲ။ စဈဗိုလျတှကေလညျး ဘူးခံခဲ့တာပဲ။ လုံးဝရှဆေ့ကျသှားလို့လညျးမရဘူး။ အဖွလေညျးမပျေါဘူး။ အခုဟာက ပထမအဆငျ့တော့ ပထမအဆငျ့ပေါ့ဗြာ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒါအပွငျ မွနျမာ ရိုဟငျဂြာမြားအဖှဲ့ UK ဥက်ကဌ ဦးထှနျးခငျ ကလညျး
ဦးထှနျးခငျ ။. ။ ကနြျောတို့အနနေဲ့ NUG အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ ကနြျောတို့ တနိုငျငံလုံးကို ကိုယျစားပွုတဲ့အစိုးရတရပျအနနေဲ့ လူမြိုးတုံးသတျဖွတျမှုနဲ့ ပတျသကျလို့ Preliminary objections ကနျ့ကှကျမှုကို ICJ ကမ်ဘာ့တရားရုံးမှာ ရုတျသိမျးတာဟာ ကနြျောတို့နိုငျငံအတှကျ လက်ခဏာကောငျးဖွဈတယျ။ ရိုဟငျဂြာတှအေားလုံးက NUG ရဲ့ ရုတျသိမျးမှုအပျေါမှာ ကွိုဆိုတယျ။ ဒီမှာတခုတှရေ့တာက NLD အစိုးရက လူမြိုးတုံးသတျဖွတျမှုကို ငွငျးဆနျခဲ့သလို NUG က မငွငျးဆနျဘူး။ NLD လုပျခဲ့သလိုမလုပျဘူး။ ဒီဟာမှာ ပျေါလှငျနတောက NUG သညျ ကနြျောတို့နိုငျငံရဲ့ တရားမြှတတဲ့ မဏ်ဍိုငျတှအေားလုံးမှာ နိုငျငံတကာနဲ့ ပူးပေါငျးသှားမယျဆိုတဲ့ဟာက ဒီနရောမှာ ပျေါပျေါလှငျလှငျထငျထငျရှားရှားတှရေ့တယျ။ အဲဒီအတှကျ ကနြျောတို့နိုငျငံသူ နိုငျငံသားအားလုံးအတှကျ အားရစရာပါ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဘာကွောငျ့အခုခြိနျမှာပွနျရုပျသိမျးလိုကျတာဖွဈနိုငျလဲလို့ မေးရာမှာ ဦးထှနျးခငျ က ဆကျပွီးတော့
ဦးထှနျးခငျ ။. ။ ဘာကွောငျ့ဖွဈလဲဆိုရငျ ကနြျောတို့နိုငျငံမှာ ရိုဟငျဂြာလူမြိုးတုံးသတျဖွတျမှုဖွဈတုံးက နိုငျငံသူနိုငျငံသားအားလုံး လကျမခံခဲ့ဘူး။ မဖွဈဘူးလို့ထငျခဲ့တယျ။ရိုဟငျဂြာတှဆေိုရငျက အိမျတှရှောတှေ မီးရှို့တာက ကိုယျဟာကိုယျမီးရှို့တယျလို့ ပွောခဲ့ကွတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခု ခငျြးပွညျနယျ ထနျတလနျတို့၊ ကရငျနီတို့၊ ကရငျပွညျနယျတို့၊ စဈကိုငျးတိုငျးတို့မှာ ဖွဈနတောမှာ ကနြျောတို့နိုငျငံသူ နိုငျငံသားအားလုံး NUG သဘောပေါကျသှားတာက ဒါတှကေ စဈတပျက လုပျခဲ့တယျဆိုတဲ့ဟာက ပျေါပျေါတငျတငျတှရေ့တယျ။ လူမြိုးတုံးသတျဖွတျမှုတှကေ ရိုဟငျဂြာတငျမကဘူး။ တခွားလူနညျးစု ကရငျတှရေော၊ ခငျြးတှရေော လူမြိုးတုံးသတျဖွတျမှုက ရညျရှယျခကျြရှိရှိလုပျနပွေီဆိုတာ ထငျထငျရှားရှားတှရေ့တယျ။ ဒါတှကေို အခုခြိနျမှာ အားလုံးသဘောပေါကျပွီလို့ ကနြျောက ယူဆပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အခုလိုရုတျသိမျးမှုကွောငျ့ ICJ တရားစီရငျမှုကို ဆကျဖွဈလာမှာမေးရာမှာ ဒေါကျတာခငျဇျောဝငျး က.
ဒေါကျတာခငျဇျောဝငျး ။. ။ ဖှငျ့တာမပွောတာပါ။ အားလုံးက ဒါကိုမြှျောလငျ့နကွေတာပါ။ အဆိုးဆုံးသံသရာထဲကနပွေီးတော့ ဘာပျေါလာမလဲဆိုတာ ICJ ကအစတခွား နိုငျငံတှကေလညျး မြှျောလငျ့နတောပဲ။ ဒီဟာက တျောတျောလေးကိုပဲ အရေးပါမယျ။ ဒါကို ရဲရဲဝံဝံ မှနျမှနျကနျကနျနဲ့ ရငျဆိုငျရမယျ။ အရငျစဈတပျကလညျး မှားခဲ့တယျ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကလညျး မှားခဲ့တယျ။ Out Of Court Settlements ဆိုတာပေါ့ဗြာ။ ဒီအမှုစှဲတငျလာတဲ့ ဂနျဘီယာနိုငျငံ က. ပုဂ်ဂိုလျတှနေဲ့ မွနျမာပွညျက NUG က ပုဂ်ဂိုလျတှေ တှဖေို့လိုလိမျ့မယျ။ Informally ပေါ့ဗြာ။ ကဲ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောကွပါ။ ပွောငျပွောလိုကျ၊ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောလိုကျ အဲဒါအကောငျးဆုံးပဲ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒီအပျေါမှာ ဦးထှနျးခငျ က
ဦးထှနျးခငျ ။. ။အခုလို ကနျ့ကှကျမှုကွောငျ့ ခုံရုံးလုပျငနျးစဉျတှမှောတော့ တရားရုံးက ကိုယျစားပွုမှုဆိုတာတော့ရှိတယျ။ အဲဒါကနြျောတို့ ရိုဟငျဂြာတှအေနနေဲ့ကတော့ ဒီကစျေ့ မှာ NUG ကို အာဏာသိမျး စဈကောငျစီအစားတကျရောကျစခေငျြပါတယျ။ တရားရေးမဏ်ဍိုငျမှာလညျး NUG ရဲ့ ရုပျသိမျးမှုဟာ ပိုပွီးထိထိရောကျရောကျ အရေးပါမယျလို့ ထငျပါတယျ။ ဒီလိုကွားနာမှု စဈဆေးမှုတှမှော NUG အခမျးကဏ်ဍကလညျး ရှိနလေိမျ့မယျလို့ ကနြျောယုံကွညျပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ တကယျတော့ ဒီ ICJ အမှုအတှကျ စဈကောငျစီဖကျကလညျး ပွနျလညျခပြေဖို့ ပွငျဆငျထားကွောငျး စဈကောငျစီပွောခှငျ့ရ ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျး က ဗှီအိုအေ ကိုပွောကွားခဲ့ပါတယျခငျဗြာ။